विमोचनप्रेमी मित्र !
एकदिन बाटोमा पुरानो मित्र भेटियो । ऊ निकै हतारमा देखिन्थ्यो । ए किन यत्रो हतार प्रश्न गर्छु । कुरा-सुरा पछि गर्दै गरौंला बरु फुस्रद छ भने िहंड मसित । उसले भन्यो । र मेरो हात तान्न थाल्यो । हतारिदै हामी दुई मित्र अज्ञातस्थिलतिर हानियौँ ।
केही समयको पैदल यात्रापश्चात् हामी एउटा भव्य भवन अगाडि रोकियौ । ढोकामा राम्रा-राम्रा सारी र दौरासुरुवालमा उभिएका व्यक्ति थिए । उनीहरुलाई कृत्रिम मुस्कानमा नमस्कार बुझाएर हामी हलभित्र प्रवेश गर् यौं । पूरै हल खचाखच थियो । लाग्थ्यो कि ’em भव्य भोजको आयोजनामा उपस्थित भएका पाहुनाहरु हुन् । भेलाको मध्यभागमा हामी दुईले आसन जमायौं । मेरो मित्रले बस्नासाथ मेरो कान नजिक आएर सुटुक्क भन्यो कस्तो भव्य समारोह रहेछ । झन्डै सकिने बेलामा पो आइपुगेछौ ।
म तीन छक्क पर्छु । कतै साथी निदाउन आएको त होइन जे भए पनि नजिकको निद्रामय वातावरण हेर्नॆ लायकको थियो । कार्यक्रम चलिरह्यो । माचबाट उद्घोषकले कार्यक्रम सकिएको जानकारी दिए । यत्तिकैमा निद्रामा लीन सब आगन्तुकहरु हतपत्त व्यँूझन थाले । आऊ मित्र पेटपुजा गरौं । मित्रले पहिलेझै हात तानेर जलपानका स्थानतिर पुर् यायो । सबै श्रोताहरु जलपानलाई झम्टिन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका थिए । त्यसपछि सबै यन्त्रवत् मुद्रामा खान थाले । मेरो मित्र पनि त्यसै गर्न लाग्यो । किन मित्र हतारिएको मैले सोधे । उ मुसुक्क हास्यो र अझ जोशिएर जलपान घिच्न थाल्यो । मैले रहस्य बुझें । मेरो मित्र पुस्तक विमोचनमा ज्ञान बढाउन होइन जलपान कुम्ल्याउन हतारिएको रहेछ । अरु साहित्यप्रेमीहरुको’bout पनि बल्ल राम्ररी थाहा भयो ।
This entry was posted on जनवरी 1, 2011 at 4:19 बिहान and is filed under म र मेरो कुरा, मेरो लेख. You can subscribe via RSS 2.0 feed to this post's comments.